broker watch(broker watch) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ब्रोकर हाउसमा सामान्य कर्मचारीदेखि टप ब्रोकरसम्मको यात्रा
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विगत ७ वर्षदेखि धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) हरूमध्ये टप ब्रोकरका रूपमा परिचित अनन्तकुमार पौडेल ब्रोकर नं. ४९ अनलाइन सेक्युरिटिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । ओखलढुंगा जिल्लाको लिखु गाउँपालिका–८ थलाहारी जन्मथलो भई हाल काठमाण्डौको कोटेश्वरनिवासी पौडेल शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीएस उत्तीर्ण...
सपना सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको, थाले व्यापार अनि बने ब्रोकर
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालिरहेका भरत रानाभाट ब्रोकर नम्बर ३५ कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुन् । २०७३–२०७६ सम्म एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पदमा समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका रानाभाट कस्केली (पोख्रेली) युवा समाजका पूर्वसभापति हुन् ।...
असईमा असफल प्रियराज पूँजीबजारमा बने प्रिय
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । दुई कार्यकाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनमा अध्यक्षको भूमिका सफलपूर्वक निभाएका प्रियराज रेग्मी अहिले ब्रोकर नम्बर ५० कृष्टल कन्चनजंघा सेक्युरिटिज् प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष हुँदै रेग्मीले पूँजीबजार विकास र विस्तारका लागि नियामकमाझ बलियो भूमिका निभाएका थिए । जुन आजको...
काठमाण्डौ । मध्यरातमा एक व्यक्ति सरासर अरुको घर कमाउन्डमा छिर्छन् अनि पुरानो टीभी सेट राखेर जन्छन् । ती व्यक्तिको उद्देश्य के हो र किन गरिरहेका छन् यस्ता हर्कत ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ, यतिखेर । घटना अमेरिकाको भर्जिनिया सहरको हो । एक व्यक्ति मध्यरातमा चुपचाप अरुको घरआँगजनमा आउँछन् अनि पुरानो टीभी सेट राखेर फर्किन्छन् । अझ अचम्मको...
दुई कार्यकाल गाविसअध्यक्ष चलाएपछि जो ब्रोकर बने !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र ब्रोकरेज सेवामा आवद्ध व्यक्ति हुन् ब्रोकर नम्बर ५९ अर्थात् दिब्या सेक्युरिटीज एन्ड स्टक हाउस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् रामप्रसाद आचार्य । पर्वत जिल्ला कुश्मा नगरपालिका ७ घर भएका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले पब्लिक युथ क्याम्पसबाट स्नातक...
थेसिस गर्न जाँदा नशा चढ्यो, अनि बने ब्रोकर
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सन्तोष मैनाली ब्रोकर नम्बर ३६ अर्थात् सेक्युर्ड सेक्युरिटिज लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । नेप्सेले दोस्रो लटमा लिएको ब्रोकर लाइसेन्स परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेका मैनालीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीएस (२०६१/६३) मा गोल्ड मेडलिस्टसमेत हुन् । उनले सीएफए...
मारवाडी घरानियाका अब्बल ब्रोकर अग्रवाल
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । मारवाडी घरानियाबाट चलाइएको ब्रोकर नं. ३९ अर्थात् सुमेरु सेक्युरिटिज प्रालि काठमाण्डौको हात्तीसारमा अवस्थित छ । निकट भविष्यमै ज्ञानेश्वरस्थित जर्मन दूतावासनजिकै आफ्नै कार्यालयमा सर्न लागेको सुमेरु सेक्युरिटिजको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिनु अग्रवाल । कम्पनीको मेनेजर भने सुनिल श्रेष्ठ...
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विशेषतः उपत्यकाको पश्चिमी भेगका सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको अक्सफोर्ड सेक्युरिटीज प्रालि अर्थात् ब्रोकर नम्बर ५१ मा कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, रामकृष्ण तिवारी । स्टक ब्रोकर एशोसिएसनमा दुई कार्यकाल कोषाध्यक्षसमेत रहेका तिवारीले शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका हुन् ।...
अरुको आईपीओ भरिदिने मधु बने सफल ब्रोकर
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकर नम्बर ४४ अर्थात् डाइनामिक मनी मेनेजर्स सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्, मधु जोशी । आर्ट अफ लिभिङका प्रशिक्षक र लायन्स क्लबका सभापति जोशी काठमाण्डौ डिल्लीबजारका रैथाने बासिन्दा हुन् । शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीएस (फाइनान्स) र सीए (एसीसीए) उत्तीर्ण...
सुविधै सुविधाले भरिपूर्ण सिप्रवी सेक्युरिटीज
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । ललितपुर जिल्लामा रहेको एकमात्र ब्रोकरेज हाउसका रुपमा रहेको सिप्रबी सेक्युरिटीज प्रा.लि. अर्थात् ब्रोकर नम्बर २२, ललितपुर ११ दमकल चोकमा अवस्थित छ । कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष रुपमा सीए रविराज भट्टराई छन् । कार्यकारी अध्यक्ष भट्टराईको जन्म वीरगञ्ज हो भने हाल उनी टोखाका बासिन्दा हुन् । विश्वविद्यालय...
रु ३–४ हजारबाट बजार प्रवेश गरेका व्यक्ति यसरी बने ब्रोकर
- भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसनमा सदस्य र सुन्धारा सेक्युरिटीज लिमिटेड (ब्रोकर नम्बर ५२) का सीईओ हुन्, फणिन्द्र ढकाल । भरतपुर चितवन पुख्र्याैली घर भएका ढकालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) बाट लगानी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । डिग्री अध्ययनकै क्रममा लगानीकर्ताका रूपमा उदाएका ढकाल सुरुमा सेयर बजारमा ३-४ हजार...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर एसोसिएशनका सदस्य समेत रहेका २९ वर्षीय सुमन गौतम स्टक ब्रोकर ओपल सेक्युरिटीज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, अर्थात ब्रोकर नम्बर ४ का एमडी हुन् । सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्समा पब्लिक डाइरेक्टरको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका उनको पुख्र्यौली घर स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा हो भने हाल काठमाण्डौ–३...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विगत १० वर्षदेखि धितोपत्र व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)का रूपमा अनवरत काम गरिरहेका नरेन्द्रराज सिजापती ब्रोकर नम्बर ४६ अर्थात् कालिका सेक्युरिटीज प्रालिका प्रबन्ध संचालक हुन् । सिजापती स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष (२०६८-२०७०) समेत हुन् । शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर (वित्तशास्त्र) गरेका...
बहुमुखी प्रतिभाका धनी, ब्रोकर विजय रानाभाट भन्छन्–‘२४ घण्टै सेयर कारोबार हुनुपर्छ’
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र व्यवसायीहरुका भीडमा सम्भवतः बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन् विजय रानाभाट । उनले ब्रोकर नम्बर ५५ अर्थात् भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. सञ्चालन गरिरहेका छन् । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रानाभाटको ब्रोकर कार्यालय काठमाण्डौ–२९ न्यूरोडमा छ । काठमाण्डौ–९ गौशालाका बासिन्दा उनले शंकरदेव...